Inqwelomoya yaseBelavia ngenjini engaphumelelanga yenza ukufika okungxamisekileyo eMoscow
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelomoya yaseBelavia ngenjini engaphumelelanga yenza ukufika okungxamisekileyo eMoscow
Airlines • isikhululo • Iindaba zeBelarus Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Inqwelomoya yabakhweli baseBelarusian ifike eDomodedovo Airport eMoscow inenjini enye yokusebenza.
Inqwelomoya iBoeing 737 esebenza yiBelavia yathumela umqondiso ongxamisekileyo eRashiya.
Inqwelo moya yabakhweli iBelavia yayisendleleni esuka eMinsk isiya eAntalya, eTurkey.
Kukho abakhweli abangama-197 kunye nabasebenzi abasixhenxe abakhwela inqwelomoya yaseBelavia.
Inqwelo moya ye-Boeing 737 eqhutywa ngumphathi womoya waseBelarusian IBelavia, eyayisendleleni esuka eMinsk, eBelarus isiya eAntalya, eTurkey, yenze ngempumelelo ukufika ngokungxamisekileyo e Isikhululo senqwelomoya saseMoscow Domodedovo emva kokuthumela umqondiso ongxamisekileyo wenqwelomoya.
"Inqwelomoya yaseBelavia iB29215 esendleleni esuka eMinsk isiya eAntalya ifike ngempumelelo eDomodedovo," atsho amagosa ezokundiza eRashiya.
Ngokweengxelo, inqwelomoya yaseBelavia yafika eDomodedovo Airport inenjini enye kuphela esebenzayo.
NgoMvulo, iBelavia Boeing 737 yenqwelomoya eyayisuka eMinsk isiya eAntalya yathumela umqondiso ongxamisekileyo ngelixa ibhabha kuMmandla waseBelgorod kwiRussian Federation.
Inqwelomoya yayigqitha eUkraine, kwaye emva kokuthumela umqondiso wokubandezeleka, wehla watshintsha ikhosi kuqala waya eVoronezh naseMoscow.
Kukho abakhweli abangama-197 kunye nabasebenzi abasixhenxe ebhodini.
Kwakungekho ngxelo ngokusweleka okanye ukonzakala emva kokufika okungxamisekileyo.
IFraport ifumana imbuyekezo yesibetho ngokugcina ...
Ukungavisisani kweVavanyo kuvunyiwe ...